Abakhiqizi Nabahlinzeki Bemikhiqizo - Imboni Yemikhiqizo Yase-China
I-WINBY INDUSTRY & TRADE LIMITED
Ikhandlela Elinephunga elimnandi
Amakhandlela anephunga elimnandi
Amakhandlela embiza ye-Pudding
Mason jar amakhandlela
Amakhandlela kathini anephunga elimnandi
Amakhandlela ebhodlela lewayini
Ikhandlela le-Ceramic elinephunga elimnandi
Imisebenzi yezandla namakhandlela okudala
Isethi yesipho sekhandlela elinephunga elimnandi
Amakhandlela engcina yezinyosi
Isibambi sekhandlela lengilazi
Izimbiza zekhandlela ze-tumbler
Ibhodlela lewayini lamakhandlela
Ezinye izitsha zamakhandlela
Isibambi sekhandlela sensimbi
Isibambi sekhandlela le-Ceramic
Isibambi sekhandlela se-wax
Isibambi sekhandlela likasimende
Ayikho i-Fire Aromatherapy
Itshe elinephunga elimnandi
Amathuluzi ekhandlela le-DIY
Okunye okubalulekile kwamakhandlela
TC20 2oz wax umthamo massage ikhandlela amafutha abalulekile c...
Amakhandlela anephunga elimnandi ku-golden crackle matte black...
inhlaka ingilazi jar amakhandlela Iphunga ngokwezifiso
i-matte wax yemvelo enephunga elimnandi amakhandlela-aluhlaza okwesibhakabhaka
Ikhandlela le-matte glass soy elinephunga elimnandi
iwikhi yekhandlela likakotini olulukiweyo lwe-DIY
I-Candle Wick Trimmer / Wick Dipper / Wick Snuffer
Izinkampani Zokukhiqiza Zamakhandlela Esonto - Organic...
I-OEM China Amakhandlela Elebula Yangasese - Inyosi Yemvelo Wax C...
Ikhwalithi Ephezulu Yamakhandlela Ahlala Isikhathi Eside - I-Ceramics ja...
Ikhandlela Losuku lwe-OEM/ODM Losuku Lwe-Valentine - 7...
Ikhandlela Lengilazi elisezingeni eliphezulu - Iwikhi yekhandlela likakotini ene...
Ukudayiswa okushisayo kwekhandlela lengilazi elinephunga elimnandi
Le mbiza yekhandlela yengilazi ifafazwe ngombala ohlukile, isobala futhi icacile. Uma usekamelweni, igumbi le-yoga noma isitolo sekhofi, ukukhanyisa ikhandlela elinephunga elimnandi kufanele kube yisinqumo esihle kuwe, okukwenza ukhululeke, futhi uzizwe ukhululekile. Ngemva kokuvutha kwekhandlela, indebe ingasetshenziswa ngezinhloso ezahlukene ngemva kokuhlanza.
Okokuqala, sine isitifiketi ngaphansi kwezinga le-Euro. Amakhandlela ethu asezingeni eliphezulu laseYurophu, ngakho akudingeki ukhathazeke ngekhwalithi yamakhandlela ethu. Imikhiqizo yethu ithunyelwa emazweni amaningi nasezifundeni, njenge-United States, iRussia, iYurophu, iNingizimu-mpumalanga, njll. Futhi yamukelwa kahle ngamakhasimende ekhaya naphesheya.
Okwesibili mayelana nezinto zokusetshenziswa, sisebenzisa i-wax kapharafini, i-soy wax, i-wax yezinyosi kanye nezinye izitshalo ze-wax njengempahla eluhlaza emakhandlelani. I-wax yesoya ingalayisha u-10% wamafutha abalulekile futhi inikeze ukuphonswa kwephunga elimnandi. Futhi ingcina yesoya ayinazo izithasiselo zamakhemikhali noma odayi.
Okwesithathu ngephunga, sisebenzisa izinhlobo ezingaphezu kuka-100 zephunga elimnandi elikhethiwe lamakhandlela. Abahlinzeki bethu bephunga elimnandi ngama-CPL aromas kanye ne-Firmenich. Bonke baphezulu izinhlobo zabahlinzeki bephunga emhlabeni. Lawa maphunga atholakala kusetshenziswa iphunga elimnandi kanye namafutha abalulekile, futhi azokusiza ukuthi udale indawo eduduzayo. Ngamaphunga, singakunikeza amakha ahlukene ngendlela othanda ngayo. Uma uthanda iphunga elinamandla, ungakhetha amafutha angu-10% ekhandlela; uma uthanda iphunga elithambile, ungakhetha amafutha angu-5% ekhandlela.
Ngaphezu kwalokho, sinomnyango wethu wokuklama nokuthuthukisa, futhi singahlinzeka ngesevisi ye-ODM ne-OEM kumakhasimende. Sinikeza isevisi ephelele kusukela kumqondo wokuqala kuya emikhiqizweni yokugcina egunyaziwe. Abaklami bethu abangochwepheshe bazokusiza ufinyelele umgomo wakho.
I-W40R Iwikhi yewaksi kakotini enosayizi omningi yobude bokwenza amakhandlela
Umbala wangokwezifiso welogo ephrintiwe kanye nosayizi
Nikeza isampula yesevisi yokuhlobisa ikhaya
Sinolwazi olucebile, ubuchwepheshe obuvuthiwe emakethe yamakhandlela cishe iminyaka engama-20.
Sihlinzeka ngenkonzo yamakhasimende ye-ODM OEM.
silindele ukuba umlingani wakho wesikhathi eside e-China.
R05 220ml Isitayela esisemfashinini nesilula ibhodlela le-diffuser eliyiphunga eliyingilazi esobala
I-R04 100ml Isitayela esilula esibonisa ngale sebhodlela lengilazi eliyisicaba se-diffuser
R01 150ml Ibhodlela lesisu elikhulu elinuka kamnandi lokuhlobisa ikhaya nomoya ohlanzekile
Usayizi: D 6.8cm*H 9.9cm
I-H21 Ingcina yezinyosi yemvelo eyenza ukwakheka kwekhekhe lezinyosi isethi yesipho sekhandlela
H19 Ingcina yezinyosi yemvelo yokwenza i-wax yetiye elincane elinganuki
Usayizi: 4 * 1.8cm / ucezu
E86 Isethi yesipho sekhandlela lekhandlela langokwezifiso elimise okwembali
Usayizi: D 8.2cm*H 9.6cm
E77 I-wax yesoya yemvelo eyenza ukwakheka kweqabunga lekhandlela elinephunga elimnandi
Usayizi: D 14.5cm*H 3.7cm
E64 I-wax yesoya yemvelo yokwenza ikhandlela lobuciko bomumo we-cactus
Usayizi: D 8cm*H 12cm
I-MZ01T I-Soy wax enephunga elimnandi lekhandlela lekhandlela lengilazi lekhandlela
Usayizi: D 6.9 cm*H 8.7 cm
I-A08T Transparent yengilazi enemibala eminingi yekhandlela elinephunga elimnandi elinelebula yangokwezifiso ewubukhazikhazi kanye nesembozo soqalo
Usayizi: D 9.3 cm*H 10.6 cm
123456 Okulandelayo > >> Ikhasi 1/16
Iphephandaba Hlala ubukele ukuze uthole Izibuyekezo
© Copyright - 2019-2021 : Wonke Amalungelo Agodliwe.